ADEEGYADA IMTIXAANKA EMC
Naqshadeynta Qorshaha EMC
Geedi socodka oo dhan ee EMC iyo taageerada farsamada ee naqshadeynta hordhaca ah ee cilmi baarista iyo horumarinta wax soo saarka, iyo waxay bixisaa naqshad tixraac dhameystiran iyo dukumiinti farsamo.Hoos ka siiso taageero farsamo goobta iyo habeyn wax soo saar shaqsiyeed si ay uga caawiso macaamiisha hagaajinta, xalalka wax soosaarka sayniska iyo macquulka ah.
Waxay tijaabin kartaa CE, FCC, 3C iyo mashaariic kale oo shahaado bixin ah. Shaybaarka sidoo kale waxaa lagu qalabeeyaa qalabka baaritaanka qalabka korontada, wuxuu tijaabin karaa noocyo kala duwan oo ah qalabka hore ee baabuurta.Waxaan bixinaa adeegga baaritaanka iswaafajinta elektromagnetic, fadlan horay u sii ballan.
Qaadista, shucaaca iyo walxaha kale ee tijaabada ah waxay ka badan yihiin heerka tijaabada tijaabada si loo soo bandhigo talooyinka hagaajinta iyo habab wax ku ool ah, ka hortaga, waxay ka caawisaa macaamiisha inay yareeyaan faragelinta alaabada, si loo gaaro ujeedada laga gudbo imtixaanka.
Kireynta EMC Lab
Imtixaanka hore ee saadaalinta macaamiisha iyo kadib markii uu ku guuldareysto imtixaanka. Laboratory waxaa loo kireyn karaa macaamiisha si loo xaqiijiyo dhowr jeer, shaybaarka si toos ah ayaa loo soo diri karaa, ama macaamiisha laftooda ayaa imanaya imtixaanka goobta ， fadlan horay u sii ballan.
Qalabka kor u kaca
Qalabka baaritaanka dheecaanka korantada ee 'ESD'
La qabtay qalabka baaritaanka ka hortagga faragelinta
anteeno xilliyeed gal ah (30MHz-1GHz)
Qaadashada tijaabada samaynta (9KHz-3GHz)
Sitirometer-ka tijaabada shucaaca (10Hz-26.5GHz)